Dowladda oo maal-gelineysa bay’adda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka dhaqaalaha Magdalena Andersson oo qayb ka mid ah miisaaniyadda dayrta ku soo bandhigtay aqalka madaxtooyada Rosenbad ee ku yaala Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT
Dowladda oo maal-gelineysa bay’adda
Maalin-gelin Taariikhi ah
Publicerat tisdag 6 september 2016 kl 16.03
Dowladda Sweden ayaa ku dhawaaqday in ay ku sameneyso maal-gelintii ugu weyneyd abad ee lagu sameeyo bay’adda.
Miisaaniyadda daryta ayey dowladda damacsan tahay in ay maal-gelin dhan 10,9 bilyan oo karoon ku sameyso howlaha cimilada, shidaalka aan qadiimiga aheyn ee gaadiidka iyo weliba tamarta dib loo cusbooneeyo. Maal-gelinta dowladda ee bay’adda iyo cimilada ayaa ka bilaaban doonta 2017-2020.
- In la illaaliyo cimilada waa horumarka ugu wanaagsan ee la sameyn karo, waxayse u baahan tahay maal-gelin, waana middaas waxay dowladdan hadda sameyneyso, sidaas daraadeed ayaa maanta soo bandhigeynaa maalgelintii ugu badneyd ee waligeed lagu sameeyo bay’adda iyo cimilada, ayuu ka sheegay ra’iisalwasaare Stefan Löfven shir saxaafadeed ay ku soo bandhigtay miisaaniyadda derta qaybta ay ugu talo-gashay bay’adda iyo cimilada.
Maagelinta dowladda ee bay’adda ayaa dhowr u qaybsan. Sannadka 2017ka dowladdu waxay ku maalgelineysaa bay’adda iyo cimilada dhaqaale gaaraya 1,8 bilyan, halka sannadka 2018ka ay gelineyso dhaqaale dhan 4,5 bilyan oo karoon. Snnadka 2019-2020 waxay dowladda u qorsheysay dhaqaale dhan 5 bilyan oo karoon.
Dhaqaalahan maagelin ee dowladda waxaa loogu magelinayaa afar waaxood oo kale ah soo saaridda tamarta dib loo cusbooneysiiyo, shidaalka aan aheyd qadiimi ee loo adeegsado gadiid lagu dhoofo iyo weliba in Sweden ka qayb-qaadato maagelinta caalamiga ah ee bay’adda.
- Waxaynu maagelin ku sameyneyaa socdaal aan loo adeegsan shilka qadiimka ah, maanta Waaxaha gaadiidka waa qaybta u baahan in aan howl badan ka qabano si hoos loogu dhigo qashinka lagu daayo bay’adda, waana qayb aan sidaas wax weyn horey looga qaban, sidaas daraaded ayeynu maagelin taariikhi ah ugu sameyneyaa, ayey tiri wasiirka dhaqaalaha Magdalena Andersson.
Regeringen presenterade satsningar ur höstbudgeten
Golaha wasiirada oo maanta ka shiraya miisaaniyadda dayrta